Toleeraa Adabaa: Hidhannoo hiikkachuu Waraana Bilisummaa Oromoo irratti ejjennoon ABO maali? | Kichuu
Posted on October 12, 2018 by kichuu_admin
Obbo Toleeraa Adabaa, Dubbi Himaa ABO
(bbcafaanoromoo)–Partilee karaa nagaan qabsaa’uuf biyyatti deebi’an keessaa dhimmi Adda Bilisummaa Oromoo (ABO) hidhannoo hiikkachiisuu dhimma ijoo dubbii miidiyaalee idileefi kan hawwaasummaa tibba kanaa ture.
Ministirri Muummee Dr. Abiy Ahimed dhimma kana irratti Roobii darbe gaaffii gaazexessitoonni biyya keessaa gaafataniif deebii kennaniin, ” Dhimmi hidhannoo hiikkachiisuu waan nu yaaddessu miti,” jedhan.
Dr. Abiy muddama bifa duulaatiin miidiyaalee hawwaasummaa irratti deemu dhaabuun barbaachisaa ta’uu himuun salphisanii tasgabeessanii ilaaluun gaarii akka ta’e dubbataniiru.
“ABOs ta’e paartileen biroo waliin walitti dhiyaannee mari’anna, waliinis ni hojjenna biyya biraa hin qabnu” jedhaniiru.
Waa’ee waligaltee mootummaa fi ABO namoonni maal jedhu?
“Dhimmi hidhannoo hiikkachuu waan nu yaaddessu miti”
Deetaan Ministiraa Waajira Dhimmoota Komunikeeshinii Mootummaa Federaalaa Obbo Kaasahun Gofees dhimmuma kanarratti ibsa Roobii darbe kennaniin ABOn gara biyyaatti kan gale hidhannoo hiikkateeti, ammas kan hafe hiikkachuu qaba jedhaniiru.
Ibsa gama mootummaan kennameefi Waraana Bilisummaa Oromoo (WBO) hidhannoo hiikkachuu waliin walqabatee gaaffii jiru irratti BBC Afaan Oromoo Dubbi Himaa ABO Obbo Toleeraa Adabaa gaafateera.
BBC: Ejjennoon Adda Bilisummaa Oromoo maalidha?
Obbo Toleeraa: Ejjennoon Adda Bilisummaa Oromoo dhimma kanarrattii qabsoo karaa nagaa itti fufudhaaf mootummaa waliin walta’ee itti seeneera.
Dhimma waraanaa kan ilaallatu ammoo waan mariyatamee xumura hin argatiinitu jira. Isa irratti ammoo hojjetamaa jira.
Walii gala garuu waan hidhannoo hiikkachiisuu isa jedhu kanaa namoonni walta’insa ABO fi mootummaa gidduutti ta’eerratti hubannoo gahaa hin qabne ykn yeroo marii sana hin turretu akkuma itti fakkaatetti hiika itti kennaa jiru.
Waraanni kun waraana uummataati, uummatis jiraachisaa ture. Uummatatti hirkatee jiraate.
Kan inni qabsoo gochaa ture ammoo mirga uummataa kabachiisuuf waan ta’eef karaa akkamiin qabsoo isaa itti fufuun danda’ama kan jedhurratti mootummaa waliin haasawarra jirama.
Akka xumurameen ammoo uummataaf ibsama malee calluma jedhamee hiikkachiisuu hiikkachiisuu jechuun kun waan daandii isaarraa fagaate ykn walta’insa irraa fagaateetti hubanna nuti.
Kanaafii dhimmi kun mariirra jira waan ta’eef akkuma xumura argateen gam-lamaan ibsa barbaachisu kennu jechuudha.
BBC: Qondaalli mootummaa yeroo dubbatan marii Asmaraatti ta’e irratti dhimmi hidhannoo hiikkachiisuu kun dubbii ijoo hin turre jedhan. Erga biyya galtanii booda dhimma kana irratti waanti mootummaa waliin mariyattan ni jiraa? Eenyu waliin mariyattan?
Obbo Toleeraa: Inni kun jalqabumarraa ni jira. Maaliin kan ABO ykn kan Waraana Adda Bilisummaa Oromoo akka addatti kaaafamu nuuf hin galle.
Dhuguma namoonni WBOn akka hiikkatan barbaadan ykn ammoo murni uummanni Oromoo akka hin hidhanne, akka inni harka qullaa akka inni jiraatu barbaadanis ni jiru. Sana ni hubanna.
Haa ta’u malee mootummaa waliin waan haasofne qabna. Innis xumura akka argateen waan ibsinu ta’aa jechuudha.
Marii mootummaan Asmaratti jila ABO waliin wal argee mariyaterratti kan ka’edha dhimmi kun. Dhimmi sunis gamuma kanaan xumura argata jennee yaadna.
BBC: Kanaafuu dhimmi hidhannoo hiikkachiisuu kun Asmaraatti ka’eera jechuudhaa?
Obbo Toleeraa: Eyyeen, akka gaariitti ka’eeraa irrattis mariyatameera.
BBC: Waanti mariyattanii irratti walii galtan maalidha?
Obbo Toleeraa: Mariin sun yeroo sanatti hin gudunfamne. Biyya akka seenameen kan xumura argatu ta’a jedhame.
Kaafamee haasa’ameera. Waraanni kun waraana uummataa ta’uu isaa irratti walhubannoorra ga’amee fuula duratti akkamittiin hammatamee qabsoo keessatti akkamitti itti fufuu danda’urratti marii gaggeeffamedha.
Kun ammayyu xumura hin arganne. Kanaafuu gaafa xumura argate ibsamaa jechuudha.
BBC: Erga biyya galtanii booda qaama mootummaa kam waliin mari’attan dhimma kana? Amma hin xumuramne jettan. Eenyu waliin mari’achaa jirtu?
Obbo Toleeraa: Kan dhimmi ilaalu yeroo sana jilli dhimmi kun yeroo sana waliin irratti haasa’amee Pirezedaantii MNO Obbo Lammaa Magarsaafi Ministira Haajaa Alaa Dr. Warqinaa Gabayyoo waliin haasa’ame.
BBC: Erga biyya galtanii booda hoo qaama mootummaa kam waliin mari’attan dhimma kana?
Obbo Toleeraa: Jilli ABO erga dhufee hojii adda addaatiin qabamee ballinaan irratti hin haasa’amnee beellamaan jirama.
BBC: Kanaafuu, dubbii keessanirraa kan hubatamee mootummaa waliin furuudhaaf hojjechaa akka jirtanidhaa gama kaaniin ammoo akka ko’oomachaa jirtanidha. Qaama mootummaa dhimmi kun ilaallatu waliin mari’achaa jirtuu, furuuf yaalaa jirtuu?
Obbo Toleeraa: Jilli ABO erga biyya seenee boodas irratti dubbatameera. Fuula duras irratti haasa’amee xumura ni argata.
BBC: Kan biraan ammoo waraanni kun akka qaama nageenyaatti akka makamuudhaaf kan yaadni dhiyaate gama keessaniin. Maaliif kana barbaaddan isin?
Obbo Toleeraa: Akka waliigalaattii WBOn uummataafi qabsaa’aa ture, qabsaa’aas jira. Kanaafuu kan haala kanaan dirqama isaa itti fufuu barbaadu achi keessatti hammatamee akka itti fufu barbanna.
Kaan ammoo akkuma ogummaafi dandeettii isaatti hojii adda addaa irratti bobba’ee gama dhaabaatiinis haata’u dhuunfaadhaan hojii argatee akka ittiin jiraatu yaada qabna jechaadha.
WBO keessa akkuma beekamu namoota dandeettiifi ogummaa garaa garaa qabanitu keessa jira.
Kanaaf, isa kana akkamiin hammachiifnee fuula duraatti akkamiin jiraachisuun danda’amaadha malee calluma jedhamee hidhannoon irraa fuudhamee gali jedhamee gaggeeffamu miti.
Akka waraanaatti itti fufuu danda’u ykn caasaa mootummaa keessatti kanneen hirmaachuu danda’an akkaataa itti hirmaachuu dand’an haalli akka mijeeffamuuf ni gaafanna.
Kanneen ammoo ogummaa adda addaa qaban ammoo ogummaa isaaniitiin akka tajaajilan ilaalchi akka taasifamuuf ni gaafanna.
BBC: Dimma mootummaan Roobii darbe ibsa kenne yoo waraanni sun hiikkachuudhaa baate ofiin hiikkachiifna jedhe irratti waanti isin gochuuf deemtan waan waraana sanaaf malu mootummaa waliin mari’attanii furmaata irra gahuuf akka yaada qabdani kanan hubadhe. Kanuma mitii?
Obbo Toleeraa: Hundeemti waliigaltee keenyaayyu callisanii hiikkachiisanii facaasanii mana mana isaatti akka galu gochuu miti.
Humni kun biyyichaafis uummataafis barbaachisaadha jennee amanna. Kanaafuu, akkaataa ittiin hammatamuun danda’amurratti hojjetamaa jira.
Miidiyaa hawaasaa kanarratti Hoj-mannee Habashoonni nuuf laattu hojjechuurra hoj-mannee uumnee kennuufiitti ol haaguddannu. Oromoon diina gurguddoo alaaf keessaa qaba. Isheen keessaa ayyaanlaallattootaafi ulee Habashoonni ittiin nureebdudha. Habashoonnimmoo slumaa olka’uu Oromoo warra hinfeenedha.
Yoo dandeenye hojii uumnee itti haalaannu. Fakkeenyaaf, waa’ee Hidhaa Hiikkannoo sanarratti hagas mara yeroo fixuu balleessine. Callisnee keessumatti keenya cimsataa yeroo jarri caraantu itti kolfuu nurra ture. Warri Maqaa Paartii Siyaasaan socho’an keenyaa sunillee #Inaaffaa #ABO irraa qaban keessa gugu’atan.
Kana booda; kottaa waan diinni darbatuuf wacuurra hojiin haacaallu. Amma kan namni kenya hinbeekne tooftaan Bineensummaa gama “Education Road Map’ jedhamuun gadi ba’e sun dhaloota keenya doomsuuf tooftaa aggamamedha. Sanafaarratti beekumsaan dura dhaabachuu; diddaa sirna Barnootaa Habshoonni gadi diriirsite babaldhisuu wayya. Hayyoonni Oromoo kan keessaatti hin hirmaanne sirna barnootaa hamaatu deemaa jira. Dammaqaa! Kana ta’uu baannaan Sirni kun nuwaccisiisaatuma waggaa 28 dabalataan nubulchuuf jira. Ammallee siyaasni keenya wacarra hindabarre!
Kaleessa #Finfinnee biyya abbaa keenyaa keessa akka hinlixne warra G-7 n dhorkamne, har’ammoo Magaalaa #Adaamaa galma ababa gadaa keessaatti Habashoonni dhiichisuuf qophii xumuraa jiran. Rakkoo ka’u hundumaaf itti gaafatamaan Kaantiibaa Magaalaa Adaamaa obbo #Masfin waan ta’eef bilbila kanaan gaafadhaa: 0930596161
Urgent.! Diddu balaatu bu’a.!
Bilbilli kantiiba Magaalaa #Adaamaa kunooti yoo gurra Dhageetti qabate bilbilaa itti himaa 0930596060.
Biyyii Biyya kashalaphooni itti lafa dhiittu miti.. Qeerroof Qarreen #Oromoo Waregama qaalii kan kanfaleef Kara Deemtu Abbaan argitee biyyaa keenya irraatti haa dhiichiftuf miti..
Tokkummaa Qeerroo Oromoo irraa..